Laser Cutting nke mejupụtara Materials na nka na ụzụ Textiles - Golden Laser
Laser Cutting nke mejupụtara Materials na nka na ụzụ Textiles
Ngwakọta ihe mejupụtara bụ ngwakọta nke ihe abụọ ma ọ bụ ọtụtụ ihe okike ma ọ bụ nke artificial nwere ihe dị iche iche na nke kemịkal. Ngwakọta ahụ na-eme ka ihe ndị bụ isi nke ihe ndị bụ isi, dị ka ike agbakwunyere, arụmọrụ ma ọ bụ ogologo oge. Ihe ndị mejupụtara na textiles teknụzụ dabara na ọtụtụ ọnọdụ. N'ihi uru pụrụ iche ha nwere karịa ihe ọdịnala, a na-ejikarị ihe ndị mejupụtara na teknụzụ arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche dịka mbara igwe, ihe owuwu, akụrụngwa, ọgwụ, ndị agha na egwuregwu.
Ihe CO2 laser ọnwụ igwenke Golden Laser meputara bu ngwa oru ohuru nke puru igbachapu udiri ihe di nkpa site na textiles nke oma na nke oma. Na igwe na-egbu laser anyị, akwa akwa ma ọ bụ ụfụfụ na ụlọ ọrụ nhazi na-aba uru.
A na-enwe ike ịmepụta akwa na nke dị ala maka textiles ọdịnala sitere na eriri artificial dị ka (akwa, akwa ma ọ bụ akwa mkpuchi) yana akwa ọkachamara na teknụzụ dị ka ihe eji emepụta site na ụfụfụ ma ọ bụ laminated, ihe na-ejide onwe ya. A na-eji ihe eji emepụta akwa ụdị akwa a dị ka nke a n'ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla nke mmepụta ihe.
Uru kasịnụ nke iji teknụzụ laser maka ịcha textiles bụ akụkụ a kara akara nke na-egbochi ihe ahụ ịpịgharị na ọkwa.